Nezvedu - HEBEI ENGE BIOTECH CO., LTD
ENGE Akazvarwa Zvekurima
Tarisa pane hutano
Enge Biotech locates muShijiazhuang Hebei, China. vanoita mukugadzira agrochemicals anosanganisira Insecticides, Herbicides, Fungicides, Zvirimwa zvekukura zvinodzora, Veruzhinji hutano hwezvipembenene kudzora, Pesticide intermediates uye Fertilizers .. Yakashongedzerwa nemaseti mazhinji epamberi ekugadzira mutsara weTC, SC, WDG, DF, WP, SP, EC, EW , SL, ME, GR, nezvimwe. Zvikwata zvedu zvine makore anopfuura makumi maviri ruzivo rwekugadzira zvipembenene. Tsigira zvinopfuura makumi mashanu zvinhu kunyoreswa (ICAMA) uye nekugona kwakasimba paR & D chigadzirwa chitsva.
Hupenyu Hupenyu Hwekambani Yedu. Enge Biotech zvigadzirwa zvese kubva kune vanovimbika, vanopupurirwa vatengesi, mafekitori edu anodzora zvigadzirwa zvemhando zvakanyatso, neyemberi michina yekugadzira mupasi, isu tinogadzira nekugadzira nenzira ine mutoro, tichiona kuti zvigadzirwa zvedu nemaitiro ekugadzira anoteerera kune akaomesesa mhando emhando.
Kusangana neFAO zviyero, uye zvakare edza zvakanakisa kusangana nevatengi akasarudzika emhando yepamusoro zvinodiwa.
Kupa vatengi nezvakachengeteka, zvinowedzera eco-zvine hushamwari uye zvirinyore kushandisa zvigadzirwa.
Kupa vatengi neyakareba-nguva, yakagadzikana uye inoenderera zvigadzirwa uye masevhisi.
Inotsigirwa neyakaomarara mhando kutonga system uye makumi emakore ehupfumi ruzivo Enge Biotech yakatumira kunze kwemarudzi anopfuura zana ezvigadzirwa zvine dzakateedzana mafomati kune anopfuura makumi matatu nyika, misika mikuru iAsia, North America, South America, Africa neRussia. Isu takawana mukurumbira wakanaka nekuda kwezvakanaka zvigadzirwa uye masevhisi akanaka.
Kurima Ndicho Chinhu Chikurusa Munyika
Kukosha kwedu uye chinangwa ndechekusimudzira hupenyu hweavo vanogadzira nevaya vanodya, kuona kufambira mberi kwemagetsi anouya, Enge Mission ndeyekugadzira hunyanzvi hwepamusoro, yakaderera chepfu uye yakaderera zvisaririra zvipembenene, Dzivirira hutano hwezvirimwa uye hutano hweveruzhinji, kukura pamwechete nevatengi vepasirese.